3 Waxyaabood Oo U Daran Caafimaadka Ilkaha Iyo Xalka - Daryeel Magazine
3 Waxyaabood Oo U Daran Caafimaadka Ilkaha Iyo Xalka
Ilkaha ayaa ah quruxda qosolkaga, hadaba waa ay haboontahay in caadaantood iyo caafimaadkooda la dhowro
1. Cabitaanka Warshadeysan
Cabitaanka dhalooyinka ku jira ama casiirka qasan ayaa sokor aad u badan iska leh kasoo marmar ka sokor badan soda-da sida pepsi. Cabitaankisa ayaa wax saas ah uga sahlaneyn adoo shukulaato ku luqluqda.
Xalka: Waxad ku caabtaa tuubada cabitaanka ‘Straw’ oo cabitaanku yuusan taaban ilkahaga dhuuntaada toos ha u maro. Waxaad sugta mudo dhan 45-daqiiqo markaad cabtid kabacdi markas iska caday ilkaha. Sababtoo ah aashitada ku jirta cabitaanka ayaa jilciyay korka ilkaha.
2. Miraha la Qalajiyay (Dried Fruit)
Miraha ama khudaarta la qalajiyay ayaa u daran ilkaha ayagoo ku beera dhagdhag kasoo sokorta soo jiita wasakh badana ilkaha ku beera. Inkastoo khudaarta qeybteyd ilkaha u fiicanyihin ma aysan u fiicana markii la qalajiyo.
Xalka: Si fiican iskaga caday ilkaha adoo dhagdhaga mirahaas wataan ka nadiifinaya isla markiiba.
3. Vitamins oo la calashado
Vitamins-ka nooca la calashado oo gummy vitamins loo yaqaan ayaa ayana sababa dhagdhag sida miraha la qalajiyay kasoo waxyaabo adag ‘Gingivitis’ ku beera dhinacyada ilkaha hadii aan laga nadiifin.
Xalka: Vitamin-kaga nooca kaniinka caadiga ah u badallo, inkastoo uu qaraaryahay balse waxaad ka baqaneysa booqashada dhakhtarkaga ilkaha.
Noocyo Cuntooyinka Ka Mid Ah Oo Ilkaha U Keeni Kara Midabka Jaallaha Cabitaano Caafimaadka U Roon Jirkana Ka Saara Sunta Iyo Qashinka Daryeelka Bishimaha Iyo Cadeynta Ilkaha Nafaqada Iyo Caafimaadka Baamiyaha